Weerar lagu qaaday baabuur maraysay tuulada Kob-dhaxaad ee gobolka Bari oo dhimasho iyo dhaawac sababay. – Radio Daljir
Weerar lagu qaaday baabuur maraysay tuulada Kob-dhaxaad ee gobolka Bari oo dhimasho iyo dhaawac sababay.
Kob-dhaxaad, July 28 ? Inta la hubo todoba qof ayaa ku dhintay in ka badan 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar gaadmo ah oo barqanimadii maanta rag hubaysani ay ku qaadeen baabuur rakaab iyo xamuul siday oo marayey tuulada kob-dhaxaad ee gobolka Bari.
Weerarkaan oo lagu tilmaamay in uu ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa gaystay rag hubaysan oo isla deegaankaasi ka soo jeeda kuwaasi oo jid-gooyo u dhigtay baabuurtaasi rakaabka ah oo ka yimid dhinaca degmada Qandala ee gobolka Bari kuna sii jeeday magaalada Bossaaso.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa iskugu jira rag, dumar iyo caruur, waxaana falkaan lala xiriirinayaa aanooyin qabiil oo in muddo ah u dhaxeeyey dagmooyin walaalo ah oo wada deggan deegaanno ka mid ah gobolka Bari, kana soo kala jeeda degmooyinka Ufayn iyo Carmo.
Dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi maanta ayaan wali la gaarsiin goobo caafimaad oo lagula tacaalo xaaladdooda, inkastoo ay haatan ku sii wajahan-yihiin isbitaalka guud ee magaalada Bossaso, waxaana dad xog-ogaal ahi ay Radio Daljir u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkaasi in ay qabaan dhaawacyo halis ah.
Dhinaca kale, wararku waxaa ay tilmaamayeen baabuurtii la weeraray oo tiradoodu ahayd illaa afar gari labo ka mid ahi in ay gubteen, inkastoo warar kalena ay sheegayaan baabuurta gubtay in ay dhan tahay illaa saddex gaari.
Maamulka Puntland iyo nabaddoonnada gobolka Bari iyo wax-garadka labada ardaa ee xurguftu u dhaxayso ayaa wada dadaallo baaxad leh oo lagu baadi-goobayo hab lagu xakameeyo colaad dhiig kan ka badani ku daato, waxaana nabaddoonnada gobolka Bari ay soo saareen baaq-nabadeed oo nuxurkiisu yahay in la joojiyo lurta colaadeed.
Falkaan maanta dhacay waxaa ku xiriray oo colaadda labadaasi qoys ku saabsanaa mid isna 21 bishii June ee aynu soo dhaafnay ka dhacay isla tuuladaasi Kob-dhaxaad kaasoo ay ku nafwaayeen illaa afar ruux tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen.
Muddo dheer ayey soo jiitamaysay colaadda u dhaxaysa labadaan beelood ee walaalaha ah, waxaayna ay ka soo unkantay isku qab-qabsi dhul deeqsin iyo deegaan iskugu jira oo ay labada beeloodba ku doodayeen lahaanshihiisa.
Muddadii ay jirtay xurguftaan colaadeed ee u dhxaysay labadaasi beelood waxay sababtay khasaarooyin naf iyo maalba leh, waxaana naftoodii ku waayey dad badan oo ku dhintay weeraro ka fool-ka-fool ah iyo dilal gaadmo ah oo ka kala dhacay meelo badan oo miyi iyo maagaalaba iskugu jira.
Intii ay aloosnayd colaadda labadaasi beelood waxaa barbar-socday dadaallo badan oo xagga nabadayntooda ah taasoo ay ku hawlanaayeen dawladda, issimmada iyo indheer-garadka kala duwan ee reer Puntland laguna baadi-goobayey is-afgaradkooda.
Dhawr jeer oo kala duwan ayaa la is-horkeenay waxgaradka labadaasi beelood si ay uga gudbaan coladda una dhammeeyeen dhibaatada muddada dhax-tiillay, iyadoo inta badanna kulamadii dhacay is-fahan buuxa laga gaaray, hase ahaatee badankoodu aysan noqon kuwa dhaqan-galay.
Heshiiskii ugu danbeeyey ee la dhex-dhigay labada dhinac waxaa uu ka dhacay magaalada Bossaso kaasoo lagu gaaray is-afgarad buuxa oo dhammaystiran iyadoo la isla qaatay heshiis nabadeed iyo wax-qaybsi walaalnimo oo ku aaddanaa khasaarihii labada dhinac soo kala gaaray, hase ahaatee heshiisyadaasi waxaa ay dhaawacmeen kaddib markii dhawr jeer oo is xig-xigay ay dhaceen dhacdooyin aanaysi iyo aargoosi ah oo loo badnayey in ay la xiriireen dirirtii hore kuwaasi walwaliyey u heelanayaashii nabadda ee muddada ku hawllanaa xal ka gaaridda arrintaasi.